I-Trigger Sprayer, i-Foam Sprayer Gun, I-Foam Pump Sprayer - i-Yongxiang
Ibhodlela Lephampu Elingenamoya
Imikhiqizo yenkampani yethu isetshenziswa kabanzi ezinkampanini ezinkulu zezimonyo kanye namabhizinisi asekhaya emithi.
Sihlala sikholelwa emandleni okwenza into eyodwa ngenhliziyo yethu, sivumele i-Yongxiang ikhiqize Kuba ngcono.
I-Yongxiang ayidayisi ama-prodycts kuphela, kodwa futhi sinake kakhulu isipiliyoni samakhasimende.Silwela ukwenza abakwa-cutomers bathuthuke ngokubambisana okujabulisayo.
Ngokwezifiso 28/400 28/410 28/415 Plastic PP Material...
I-On / Vala I-Nozzle Lesi Sifutho Se-Trigger siza nesiketi esinezimbambo ukuze sisonteke kalula ngezandla ezishelelayo kanye nokufinyelela kalula kokuqukethwe ngaphakathi kwebhodlela. Ngaphezu kwalokho, lesi sifutho sepulasitiki esinezimbambo ezimhlophe sifaka umlomo wombhobho Wokuvula/Ukuvala esihlokweni sesifafazi. Ungakwazi ukusonta umlomo wombhobho Wokuvula/Ukuvala ngokwewashi noma ngokuphambene newashi izikhathi eziningi ukuze uvale ukuphuma kusifafazi. Uma ikwindawo evaliwe ivimbela isifafazi ukuthi singaphumi ngengozi futhi sigcine i-trigger imile...
I-Industrial Soap Dispenser Pump Yepulasitiki Yangokwezifiso S...
Lawa maphampu okugcoba enzelwe amabhodlela noma ama-dispenser futhi anemibala eyahlukene. Zilungele izinto ezibonakalayo ezibonakalayo, njengezigcobo, insipho ewuketshezi, nama-shampoos, kanye nemithi, izimonyo, neminye imikhiqizo yezempilo nobuhle. Ilungele izinto ezisetshenziswayo ze-viscous 24/410 amaphampu angase angalingani zonke izintamo Ikhipha u-2mL nge-stroke I-Plunger ikhiyelwa phansi ukuze ithunyelwe futhi igcinwe Amaphampu e-polypropylene lotion ane-slot yokukhiya ngaphakathi kwekepisi futhi afika athunyelwe...
18/410 20/410 24/410 360 Degree Nozzle Nozzle Pe...
Inzuzo yethu: I-1.Sinemishini yokuvula isikhunta esihle kakhulu, ithimba lezobuchwepheshe elicebile, lakha isethi yokuthuthukiswa kwesikhunta, ukubunjwa komjovo, umhlangano ongenalo uthuli, ukusebenza okuzenzakalelayo njengenye yenqubo yokukhiqiza. 2.Ngemishini yokubumba yomjovo engaphezu kuka-80, umthamo wokukhiqiza nsuku zonke wesifutho senkungu emihle ufinyelela esigidini esisodwa. I-3.I-LOGO eyenziwe ngokwezifiso ingamukelwa, isikhunta singavulwa ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende. 4.Izitifiketi: SGS/ISO9001/FDA The polypropylene (PP) fine inkungu sprayer f...
I-Ningbo Yongxiang Plastics Industry Co., Ltd iyibhizinisi elichwepheshile elihlanganyela ekukhiqizeni izifutho zepulasitiki ezihlukahlukene, amapulasitiki, imikhiqizo ye-electroplating nemikhiqizo ye-horticultural, eyasungulwa ngo-1992. Umanduleli yi-Yuyao City Jin Chun Plastics Co., Ltd. Imboni yethu imatasatasa. embonini yepulasitiki iminyaka eminingi. Inkampani yethu incikene nebhuloho elidumile laseHangzhou Bay kanye nomgwaqo weHangzhou Ningbo, ngakho-ke ezokuthutha zilula kakhulu. Inkampani yethu inomnyango we-R&D..
Imakethe ye-trigger sprayer izobona amathuba amahle okukhula phakathi nesikhathi sokuhlola sika-2021-2031 ngemuva kokukhuphuka kwesicelo ngenxa yezindawo zabo ezibanzi.
Ukwanda kokuqwashisa mayelana nokwamukelwa kwe ...